Mkpa mmanụ dị mkpa maka ntụkwasị obi - Osimiri Dị Mkpa | AromaEasy
Ihe na April 13, 2020 April 13, 2020 by Matt
mmanụ dị mkpa maka obi ike
Nkwenye bụ àgwà kachasị mma mmadụ nwere ike igosipụta. Ha jiri obi ike na-agagharị na mbara igwe, ị maara ozugbo na ha nwere ntụkwasị obi na onwe ha. Ma, anyị niile chọrọ nkwado na ụfọdụ.
Onweghi onye nwere ike idobe arụmọrụ kacha mma n’oge niile. Ntụkwasị obi nwere ike ịbụ ọgụ na mgba, ọkachasị maka nzuzo. Ga - achọ ịpụta dị ka obi ike mana ọ nwere ike iyi ihe ikpe, ma ọ bụ na-eme ihere kama. Nleta aghụghọ dị jụụ na-enweghị nleghara anya ọ bụla egosipụtara ọtụtụ ihe site na enyemaka nke mmanụ dị mkpa, enwere nhọrọ na ọnọdụ ọ bụla.
Gụọ na isiokwu a iji chọpụta mmanụ kacha mma iji mee ka obi sie gị ike yana ọnọdụ iji jiri nke ọ bụla. AromaEasy ga - egosi gị ụzọ kacha mma eji etinye akwụkwọ. Ndị a mmanụ, ị na-ekwe nkwa na-eche ihe siri ike na nkeji-- na ọ bụ 100% eke!
Oke mmanụ dị mkpa maka obi ike na obi ike
Mmanụ ndị dị mkpa nwere ike ịgbanwe otú anyị si emeghachi n'ọnọdụ dị iche iche ma gbanwee omume gị niile. Jiri ha mee ihe iji kwalite obi ike, ma belata esemokwu na egwu mgbe ị na-eche ndị ọhụụ ma ọ bụ ọnọdụ. Na-ete mmanụ dị mkpa tupu nzukọ amalite. Ma ọ bụ, jiri mmanụ iji mee ka okike gị.
N’agbanyeghi ọnọdụ ị nọ na ya, ịnwere ike ịchọta ahụ efe site na mmanụ isii ndị kachasị mkpa maka obi ike na ntụkwasị obi.
Jiri Mgbe Ichoro: Iwepu nchekasị, ichoro iche echiche, onodu iguzobe, buso egwu.
Etu esi eji: Mmanụ oroma dị mkpa na-enyere aka ịlụ ọgụ nkụda mmụọ na aromatherapy na ngwa agha. Iji mepụta ihe ọhụụ, gbalịsie ike were mmanụ ole dị mkpa mmanụ oroma dị gị n’aka, ma tinye ya n’afọ ma ọ bụ nkwojiaka. Citrus mmanụ dị mkpa, mana, nwere ike bute nsị. Buru n’uche na ịhapụ ịhapụ mmanụ citrus na anụ gị n’anwụ.
Mmanụ dị mkpa mmanụ na-egbuke egbuke ma dị mma. Ọ na-agbaso nchekasị na ụjọ nke ịkwa emo mgbe ọ na-enyere gị aka inwe mmetụta ọhụụ na obi ụtọ. Buru mmanụ a dị mkpa mgbe ike gwụrụ gị, ike gwụ gị, ma ọ bụ nwee isi ọwụwa. Ọ bara uru ụtụtụ na a Ihe mgbasa iji nyere gi aka imeri ubochi mgbe anya gi di elu.
Jiri Mgbe needchọrọ: nkwalite onwe onye, ​​ime ka ihe na-enweghị nchebe, bido na oru ngo, ike ọgwụgwụ na esemokwu dị mfe.
Etu esi eji: Aromatherapy na-enyere nrụgide na ịda mba n’obi mmadụ. Tinye ihe ole na ole iji ghaa mmiri, ma ọ bụ mee ka ylang-ylang mmanụ dị mkpa banye n'ime ụlọ ọrụ na ụlọ.
Dịka mmanụ ọzọ dị jụụ dị mkpa, ylang-ylang na-enyere ndị mmadụ aka inwe ahụ iru ala. Ihe ị ga - eme bụ inhale ylang-ylang mmanụ dị mkpa maka ịhazi oke ọbara. Ọzọkwa, nyocha na-ekpughe ndị ọrụ na-enwekwu obi ike na ịdị jụụ site na mmanụ a dị mkpa. Tinye ya n'ụlọ ma ọ bụ rụọ ọrụ ibido ọrụ ọhụụ ma kwụrụ azụ ịla azụ.
Iji Mgbe Youchọrọ: Iji wepu nchekasị na nchegbu, bulie ọnọdụ obi gị, mee ka nsogbu dị nwayọ.
Etu esi eji: Aromatherapy ka mma jiri lemon mmanụ dị mkpa karia ngwa di elu, dika okwesighi iji citrus si n’èzí rue ogologo oge.
Ukwuu na revitalizing, lemon mkpa mmanụ mbuso nchegbu na nchegbu na-ebuli gị na ọnọdụ. Ọ bara uru n'ụtụtụ mgbe ị na-echegbu onwe gị banyere ụbọchị dị n'ihu. Lemọn mmanụ dị mkpa bara uru na aromatherapy ma ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na ịda mbà n'obi ma ọ bụ nsogbu na ọnọdụ.
Jiri Mgbe wantchọrọ: Iwepu nrụgide na nchekasị, nwekwuo ike, ịkparịta ụka nke ọma.
Etu esi eji: Aromatherapy na-arụ ọrụ kachasị mma. Fkpapụ na-enye mmanụ dị mkpa n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ebe ọrụ maka idoanya.
Mmanụ ndị dị mkpa maka nrụgide na nchekasị, dị ka lavender, nwere ọtụtụ ojiji bara uru. O nwere ike inyere gị aka inwekwu udo, ntụkwasị obi, na imeghe. Mmanụ a dị mkpa na-ebelata obi abụọ onwe gị mgbe ị na-amalite ihe ọhụrụ ma ọ bụ na-aga nzukọ. Mgbe ike gwụrụ gị ma chọọ ịkwalite ihe okike gị, mee ka ndị na-achịkwa ọnọdụ gị zuo ike site na ịmịkọrọ isi ahụ.
Naanị ihe ịchọrọ bụ otu ntụtụ iji nweta ntụrụndụ ozugbo, na lavender aromatherapy bara uru karịsịa maka ụmụ nwanyị.
Jiri Mgbe needchọrọ: Iji nwee ume, ihe okike karịa, ịkọ nkọ, gbalịsie ike.
Olee otú Jiri: Rosemary dị mkpa nwere uru ogwu na uru. Dabị ole na ole dapụrụ n’azu ntị gị ma ọ bụ onye na-agbasa ozi gị n’ime oghere ka ị na-amụ iji mee ka ncheta gị dị mma. Mgbe etinyere aka na nkwojiaka, mmanu mmanu dị oke mkpa nwere ike inye aka belata isi ọwụwa na isi ọwụwa.
Dika otu n’ime mmanu di nkpa maka obi ike, Rosemary bu n’eme ka uche ya di elu na ihe itughari uche maka icheta onwe gi. Jiri mmanụ mmanụ dị mkpa Rosemary mgbe ị kwesịrị ịkwụsị ịhapụ ịhapụ itisa ma ọ bụ imebi ihe ndị dị mkpa ịchọrọ na egwu. Ọ na enyere gị aka nghọta na ọgụgụ isi ma na-enwe obi ike, ma mmanụ dị mkpa maka iche n’echiche dị mma maka ịme nzukọ.
Iji Mgbe Needchọrọ: Nkwalite ntụkwasị obi onwe gị, ịgba ọsọ n'echeghị echiche, imepụta ihe karịa, mmetụta nke ịdị jụụ na ùgwù onwe onye.
Etu esi eji: Jiri Jasmin dị mkpa na aromatherapy. Na-enye onwe gị nsogbu iji nwee ùgwù na udo, ma ọ bụ tufuo n'egedege ihu gị maka nchekwube. Nwere ike iji mmanụ a site na ịhịa aka n'ahụ.
A ọmarịcha, ụtọ Ifuru esi ísì, Jasmine mkpa mmanụ na-abịa na mmetụta nke nwayọọ euphoria na-ahapụ gị ụtọ, nti, na njikere ime nnukwu oru ngo. Dị ka mmanụ dị mkpa maka ịhụ onwe gị n'anya, ọ bụ antidepressant sitere n'okike nke na-akpali nnabata onwe na ịhụ ihe niile n'anya. Sikpuo isi ala mgbe ọ bụla ịchọrọ ịtụkwasị onwe gị obi.
Mmanụ ndị ọzọ dị mkpa maka obi ike na obi ike
Oilsfọdụ mmanụ dị mkpa maka ikwenye ma ọ bụ izu ike nwekwara ike ime ka ị nwekwuo obi ike dị ka ngwaahịa. Nwere ike itinye ihe ndị a na mmanụ dị mkpa edepụtara maka ngwakọta nkwanye ntụkwasị obi na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma.
Mpekere dị mkpa- Ihe enyemaka na - elekwasị anya ma na - enye ike
Wayo mkpa mmanụ - ermalite ihe onwunwe
Rose mmanụ dị oké mkpa- Nyere ndị mmadụ aka ịlụ ọgụ megide oke iwe
Ihe mbu n’ututu, inwere ike iji mmanu di nkpa iji were obi ike bido ubochi gi. Tinye mmanu oroma dị mkpa mmanụ n’ime gị Ihe mgbasa. Nwere ike ịme nkwadebe abalị ahụ tupu mgbe ahụ, yabụ naanị ị ga - pịa bọtịnụ ON mgbe anyanwụ dara.
Mgbe ịchọrọ ntụkwasị obi karịa ụbọchị niile, ụzọ kachasị mma iji mmanụ dị mkpa maka obi ike bụ itinye mmanụ n'azụ ntị gị mgbe ị dilesịrị ya na mmanụ ndị na-ebu ya. Debe mmanụ gị dị mkpa n'okpuru tebụl gị ma ọ bụ kwakọ mmanụ nke ọkacha mmasị gị na njem maka njem.
Mmanụ ndị dị mkpa bụ naanị maka mmeju
Ọ bụ ezie na mmanụ dị oke mkpa nwere ike imetụ mmetụta anyị, ha agaghị agbanwe gị n'abali. Ha na-enyere ndị mmadụ aka na ntụkwasị obi, ịkwanyere onwe ha ugwu, enweghị obi ike, na obi ike mgba, mana anyị niile agaghị eme mmeghachi omume n'otu ọnọdụ ahụ.
Họrọ mmanụ ndị dị mkpa na-arụrụ gị ọrụ mgbe ị nyochachara ma smụọ obere. Gbaa mbọ hụ na ka ha si eme gị obi n'ọnọdụ ọ bụla. Mgbe ah u, jiri ha mee ka obi sie gi ike ogologo ubochi niile. Obi gị ga-ekele gị!